PE bhodhoro Vagadziri & Suppliers - China PE bhodhoro Factory
Kunze Mitambo Inotakurika Mvura Bhodhoro
Iyi ibhodhoro remvura yekunze yeBAP-isina zvakatipoteredza, ine mhete inotakurika pamuromo webhodhoro, iri nyore kutakura.
Fitness Eco hushamwari hwemhando yepamusoro Bhodhoro reMvura
Iyo 1000ml hombe-yakakura-yekunze bhodhoro remvura yemitambo, yakagadzirwa nemhando yepamusoro inoshamwaridzana zvinhu, inokodzera kutevedzana kwezviitiko zvakaita sekusimba, kukwira makomo, mapikiniki, nezvimwe.
Kunze Sport Water Battler Plastiki
2500ml hombe yemitambo bhodhoro.Nemubato unotakurika, unorema uye wakasimba.Snap chivharo dhizaini, iri nyore kuvhura.Inokutendera kuti ushande neruoko rumwe panguva yekurovedza muviri.Iyo yemukati yakashongedzerwa neyekudya-giredhi sefa, uye iyo inoshamwaridzana neBPA yemahara zvinhu inobvumidza iwe kuchengetedza zvisikwa paunenge uri padyo nezvisikwa.
Yakajeka Bhodhoro reMvura BPA Yemahara
Hungave hupenyu hwezuva nezuva, kuenda kumadhorobha, kufamba kwezororo kana mitambo yekunze.Imi mese mune zvinodiwa zvemazuva ese zve hydration, saka mudziyo wekunwa wakakodzera wakanyanya kukosha.Pakati pehuwandu hwe1500ml, mubato unotakurika, kuvhura hombe kuzadza uye kuchenesa zviri nyore.Bhodhoro remvura rakadaro pasina mubvunzo ndiyo yakanakisisa sarudzo.
Sport Plastic Mvura Bhodhoro
Yakanaka uye yakatetepa kapu muviri, ine mwero kugona 1500 ml, mvura yekusveta nozzle inogona kubuditswa kunonwa, uye silicone mubato wakabatana nevhavha yebhodhoro.Yese dhizaini yedhizaini ichapa nyore kune yako kurovedza muviri.Kungave kumhanya, kuchovha bhasikoro, kukwira, kana kufamba.Iwe unogona kuishandisa neruoko rumwe uye kuzadza mvura chero nguva.